Blacklist – democracy for burma
U WIRA THU: “အင်္ဂလန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ သဘောထား10.1.2013 ရက်စွဲပါ Reporter ဂျာနယ်လ်မှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။
On November 8, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
10.1.2013 ရက်စွဲပါ Reporter ဂျာနယ်လ်မှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။
ဦးဝီရသူ၏ အကြောင်း၊ ၉၆၉ အကြောင်း၊ TIME မဂ္ဂဇင်းအကြောင်း၊ အမျိုးစောင့်ဥပဒေအကြောင်း အစုံအလင် သိရှိနိုင်မှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်တာတွေလည်း ပါပါတယ်။
TIME မဂ္ဂဇင်းကို ငွေပေးရေးခိုင်းတာ မူဆလင်မဟုတ်ဘဲ ဗမာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သေချာရင် မူဆလင်တွေ အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှား ပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်သူများပါလိမ့်…… သိကြသူများ သတင်းပို့ကြပါ။
သူ့ကိုတော့ အပြစ်မယူပါဘူး။ မူဆလင်တွေကို တောင်းပန်ချင်လို့ပါ။
ဘုရားသားတော်ဆိုတာ အမှားကို ဝန်ခံရဲရမယ်။
အမှားကို ဝန်ခံရဲတာလည်း သတ္တိပဲမဟုတ်လား….?။
“တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လေးစားမယ်၊ နားလည်မယ်၊ ယုံကြည်မယ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလည်း ရှိမယ်ဆိုရင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်စရာအကြောင်း မရှိဘူး”
(ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ၅၅၅ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရအား လျှောက်ထား မေးမြန်းခြင်း။)
ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးတွင် စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးမှုမှ ရှောင်တိမ်းရင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ အင်္ဂလန် နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဆရာတော် အင်္ဂလန်တွင် နေထိုင်စဉ် (၂၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို တစိုက်မတ်မတ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Blacklist စာရင်းသွတ်သွင်းခံရသည့် ၅၅၅ ဆရာတော်၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်-နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီ-ဒိန်းမတ်-ဖင်လန်-ဘယ်လ်ဂျီယံ-အိုင်ယာလန်ရှိ ရံသီကျောင်းများ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ ပဓာနနာယကဆရာတော်လည်းဖြစ် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း များ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆောင်ရွက်ချက်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆောင်ရွက်ချက်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ် တွဲနေထိုင်ရေး၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားအမြင်၊ ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဆရာတော် ဦးဝီရသူအပေါ် သဘောထားအမြင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်များကို လျှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့သည်များကို တင်ပြလိုက်ရသည်။ Continue reading “U WIRA THU: “အင်္ဂလန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ သဘောထား10.1.2013 ရက်စွဲပါ Reporter ဂျာနယ်လ်မှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။” →
U YE HTUT Black List မှ ထပ်မံပယ်ဖျက်ပေးခြင်း
On April 25, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Black List မှ ထပ်မံပယ်ဖျက်ပေးခြင်း
(နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၅)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Black List ရေးသွင်းခံရသောအောက်ဖော်ပြပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား Black List မှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်-
Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/04/23/id-3169
Tue, 04/23/2013 – 21:05
နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၅
စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် နိုင်ငံသား
(၁) Mr. Yoon Man Ki – Republic of Korea
(၂) Mr. Kim Yong Man – Republic of Korea
(၃) ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုး ၁၂/အစန(နိုင်)၁၆၈၂၇၇ မြန်မာ
(၄) ဒေါ်ရီရီထွန်း ၁၂/လမန(နိုင်)၁၃၇၂၆၄ မြန်မာ
(၅) ဒေါ်ခေမာကြည် ၁၂/မရက(နိုင်)၀၃၀၁၂၇ မြန်မာ
(၆) ဦးအောင်ကျော်ထူး ၁၂/အစန(နိုင်)၁၁၆၇၄၄ မြန်မာ
(၇) ဒေါ်အိအိမိုး ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၆၂၇၈၄ မြန်မာ
(၈) Mr. ZakariaKamdar – Pakistan
Burma Myanmar President Office : Black List မှ ထပျမံပယျဖကျြပေးခွငျး
On November 29, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ Black List ရေးသှငျးခံရသော ကုမ်ပဏီနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျမြားအနကျ အောကျပါ ကုမ်ပဏီ (၂၀၄) ခုနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျ (၅၈၇) ဦးတို့အား (၂၆-၁၁-၂၀၁၂ ) ရကျနတှေ့ငျ Black List မှ ပယျဖကျြပေးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ –
Blacklist ကိစ္စ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး၏ ထုတ်ဖော် ပြောကြားချက်
On November 26, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
by Myit Makha Mediagroup on 23 Nov, 2012
(၁)၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၂/၂၀၁၂) မှာ “ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနှင့် “နိုင်ငံရေးအရ နာမည်ပျက်စာရင်း” ဟုခေါ်ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းကိုလည်း ပယ်ဖျက်ပေးထားပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ယင်းကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြားပေးနိုင်ရန်လည်း သမ္မတရုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံတစ်ဦးကို ခန့်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။” ဆိုပြီး ဖော်ပြ ပါရှိပါတယ်။
(၂)အဆိုပါ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရှိ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)မှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Blacklist ကိစ္စနဲ့ပတ်သက် လို့ သူ့ရုံးကို ဆက်သွယ်မယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်မှုတို့က တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၃)ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်တင်ပြရင်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတစ်ဆင့် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ရှင်းထံကို ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိ ပေးလိုပါတယ်။
On August 28, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Posted August 28th, 2012 at 1:50 am (UTC-4)
Burma has removed over 2,000 citizens fromagovernment blacklist long used to keep exiled critics of the country’s former military rulers from returning to their homeland.
The New Light of Myanmar hailed the move asacontinuation of Burma’s recent political and economic reforms. The state-controlled paper did not discuss the status of over 4,000 people remaining on the list, keeping many journalists, activists, and others from entering the country.
It said the ban was lifted on 2,082 of the country’s 6,165 black-listed persons after “scrutinizing them in conformity with the current policies.” The newspaper did not elaborate or provide detail on who the move will affect.
The director of the Burmese President’s Office, Zaw Htay, told VOA that the reshuffling process is just starting and will later be followed by reconstruction. “This is just the beginning, more will come. This is not the final.”